Iinkcukacha-manani zokuthengisa ezingama-30 awufanelanga ukuba uziphose | Martech Zone
Izibalo ezingama-30 zokuThengisa awufanelanga ukuba uphoswe
NgoLwesine, Agasti 22, 2013 NgoLwesine, Agasti 22, 2013 Douglas Karr
Nawuphi na umfuziselo obuyisela abathengisi kwisiseko seenzame zabo unamandla ngokwenene. Besihleli nje nomthengi namhlanje kwaye sihamba ngesiseko sesicwangciso-qhinga esikhulu… siphuhlisa umxholo wamva nje, rhoqo kunye nolungileyo kwiqonga elilungiselelwe ukukhangela. Isiseko esisekho sikhona, siqinisekisa ukuba kusetyenziswa isicwangciso esiliqili. Kwaye emva koko, ukuphuhlisa ukubakho kwezentlalo ukwakha igunya kunye nefuthe-ukubuyisela abantu kwintengiso yakho kwi-Intanethi. Kwaye, ewe, kubandakanya ukubonwa kwemifanekiso nge-infographics kunye nevidiyo yeendwendwe ezingena kubo.
I-Optimind ibeke ndawonye le nkcazo ye-30 yeentengiso zedijithali ukugcina engqondweni kunye nentengiso yakho kwi-Intanethi kunye nobukho be-ecommerce.
Le infographic yaphuhliswa nguOptimind, inkampani esekwe ePhillippines. Ngeenkonzo zentengiso yedijithali, unokundwendwela www.optindinddigital.com. Ngokuba kuyilo web kwaye SEO, tyelela www.luchumko.com.
GoAnimate: Uyilo, Yenza kwaye usasaze iiVidiyo zoopopayi
I-TOMS: Isifundo esenziwe kwimeko yokuThengisa uNcedo
Agasti 29, 2013 ngo-9: 15 PM
Iarhente yentengiso yedijithali kunye neenkampani ziya kufunda okuninzi kwesi sithuba!
Sep 12, 2013 kwi-8: 22 AM
Ngaba unganika ikhowudi ukuphinda uthumele le infographic.
ULouisa YS Chan
Ngomhla wama-24 ku-Disemba 2013 ngo-2: 17 AM
Izibalo eziluncedo kakhulu ekucwangcisweni kwenyathelo elilandelayo kwaye zinolwazi kakhulu!